Nitrangana savorovoro teo amin’ny tsenan’Anosibeny 30 jolay nandritra ny fidinan’ny lefitry ny prefektioran’Antananarivo teny an-toerena, hampahafantarana ny fanapahan-kevitra mampiato ny fanamboarana tsena vaovao eo amin’ny toerana fiantsoan’ny fiara. Nosakanan’ny irony “gros bras” irony, tsy navela hiditra ny birao ny solotenan’ireo mpivarotra niaraka tamin’ny lefitry ny prefektioran’Antananarivo, ka teraka teo ny savorovoro. Niafara tamin’ny fikasihan-tanan’ireo mpivarotra ny fihetsik’ireo gros bras ireo ary voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nandray ny andraikiny. Taorian’ny savorovoro, tafahaona tamin’ny lehiben’ny tsena ihany ny lefitry ny prefektioran’Antananarivo sy ny solotenan’ny mpivarotra.
Na eo aza iny fampahafantarana ny fampiatona ny fanamboarana tsena vaovao iny, nangataka ny hamerenena ny toerana ho toerena fiantsoan’ny fiara toy ny teo aloha ireo mpivarotra. Manome 48 ora ny mpitantana ny tanànan’Antananrivo hanesorana ireo biriky sy fitaovana eo ireo mpivarotra.
Noho izany, miandry ny fanapahan-kevitry ny kaomina aorian’io 48 ora io ireo mpivarotra. Andrasana indray arak’izany na handray fanapahan-kevitra ny ben’ny tanàna na hinia hanampin-tsofina toy ny efa fanaony manolaona izao olana sesilany eto an-drenivohitra izao.